トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ulwazi oluqoqwe ukwakha inethiwekhi othintana ne abashisekeli, Pachipuro e pachinko eshintsha
Ngicabanga ukuthi kukhona amakhasimende ababona njalo uya sasemakhazeni pachinko. Amakhasimende esishintsha nsuku Shigeku unyawo kuka msebenzi, ukubizwa ngokuthi abashisekeli e pachinko umkhakha. Futhi, nakuba ngicabanga singenakwenzeka ezimakwe nge kalula, abanye abantu ngokuthi Pachipuro ukudla ku-pachinko.
pachinko emakhazeni, Amakhasimende babebhekwa njengabangakufanelekeli ngokuyisisekelo Pachipuro, kanjani ngokuvamile uvalwe kodwa kunzima ukutshela. Ngo Pachipuro enjalo noma ukuthi ngabe kungcono ukwenza ukuxhumana siqu ne Ezivamile, kodwa umuntu kufanele silazi kuze kube sezingeni lokuba ungakhuluma, ngicabanga ukuthi kuba Yebo ezisizayo.
Ezivamile zifaka phakathi, kodwa hhayi futhi ancike imicimbi kanye inkathi yokutakula, ke ngizoya okufanayo pachinko emakhazeni nsukuzonke. Pachinko iyona ozithandayo Yiqiniso, kodwa Ezivamile lingama labo bathanda ukuthenga uqobo.
umbuzo ngabe umuntu ukuqonda, kodwa kuzokwenzeka kwenye indaba, ngoba ukuhunyushwa ukuya efanayo pachinko emakhazeni nsuku zonke, siyazi basibekela ukunyakaza futhi engcono. Ngokwesibonelo, ukuthi yesikhulumi, Toka ngiyisigqila izikhathi eziningi izolo, siye utshalomali okuningi, inkulumo ka ezifana ngaphinde waphuma Ngemva okwabenza baphumelela kakhulu izikhathi eziningi, ingabe noma ukuzwa ezihlukahlukene kule ngxoxo.
ngu Awukwazi ukwenza ukuxhumana siqu ne Ezivamile, kusukela idatha, uzobe ulwazi ezifana awatholakali kalula, kungenzeka ukuthola kalula. Ngokuvamile, noma kukhona umsebenzi, ngicabanga ukuthi kukhona ngisho nalapho kunzima ukuya sasemakhazeni pachinko nsuku zonke.
ulwazi kusuka Ezivamile, kodwa ungase ngezikhathi izinto ezifana okuhle noma kanjani, ngakho-ke noma kimi ukuze ichaze abantu abaye kukhona ukubhekisisa kahle ukuze uthole olunye ulwazi, sicela ubheke ukukhuluma. Kukhona kakhulu izinzuzo ukuba uthole kanye Ezivamile.
yilona uxhumano siqu
ke Pachipuro, kodwa ngicabanga ukuthi leli iqiniso ngempela namaqiniso nzima. Nokho, uma ngakwazi ukwenza ukuxhumana lomuntu siqu ithuba Pachipuro, ngicabanga ukuthi Akungabazeki ukuba idolo umthombo ulwazi ezingaphezu kuka Ezivamile.
_x 000D_ Pachipuro kuyinto, ngoba ikwazi ukuziphilisa ngesikhathi pachinko, bekulokhu cwaningo eningi. Ngamunye specs kanye nokusebenza noma, umugqa umngcele, njengalapho ukumisa noma lapho kuhlasela, kucatshangwa ukuba ezihlukahlukene ulwazi ngemodeli ngayinye.
Nokho, esimweni Pachipuro, ngokungafani njalo, wena emhlabeni emibuthanweni esiphundu pachinko emakhazeni beyofuna onqobayo. Akusho khona nsuku zonke ukuze okufanayo pachinko eshintsha, labo ungahambi kuphela okufanayo pachinko esitolo kodwa yebo, futhi labo abaya pachinko eshintsha ahlukahlukene, futhi nazo futhi sinqume ukuthi
Pachipuro, ngicabanga ukuthi kunzima . Okuhamba phambili kwe-okungukuthi, Angazi Pachipuro, kuba ukuba babe abangane nabantu njalo kahle aphume. Lapho ngizama ukukhuluma, uma noma Kuwashika 'umshini ulwazi, kukhona kungenzeka ukuthi uthole ukunikeza ulwazi evumelekile.